“Siilaanyooy Haddii aad isleedahay xabbad baa laga baqayaa ama SPU iyo RRU ayaad ku cabsi gelinaysaa…Nagu cabsi gelin maysid..Siina fadhiyi maysid….” | Berberanews.com
Home WARARKA “Siilaanyooy Haddii aad isleedahay xabbad baa laga baqayaa ama SPU iyo RRU...
“Siilaanyooy Haddii aad isleedahay xabbad baa laga baqayaa ama SPU iyo RRU ayaad ku cabsi gelinaysaa…Nagu cabsi gelin maysid..Siina fadhiyi maysid….”
Maxamed X. Maxamuud Cumar Xaashi..“Madaxweyne wadigii adiga oo socda keligaa oo muddaharaad dhigaya lagu toogan gaadhay oo cidina xabbad ka biqi mayso, waynu ognayahay oo dadkani wax walba way soo mareen….” Xil. Maxamed X. Maxamuud Cumar Xaashi
Hargaysa-(Berberanews)- Guddoomiyaha Guddida Dhaqaalaha ee Golaha Wakiillada Maxamed Xaaji Maxamuud Cumar Xaashi oo ka tirsan urur-siyaasadeedka UDHIS, ayaa Madaxweyne Siilaanyo ku tilmaamay nin dadka ku haya cabbudhin iyo cago-juglayn waxaanu sheegay haddii uu Madaxweynuhu ka waantoobi waayo cubbudhinta iyo caga-juglaynta uu seegi doono kursiga uu ku fadhiyo.
Guddoomiyaha Guddida Dhaqaalaha ee golaha Wakiillada isaga oo arrimahaa ka hadlaya waxa uu yidhi; “Mudane Axmed Siilaanyo waxaad ahayd ninka qudha ee lahaa dadka halla-daayo oo yaan dadka la cabbudhinnin.” “Waadigii adiga oo socda keligaa oo muddaharaad dhigaya lagu toogan gaadhay oo cidina xabbad ka biqi mayso oo waynu ognayahay oo dadkani wax walba way soo mareen.” Sidaa ayuu yidhi Xildhibaan Maxamed Xaaji Maxamuud, oo ka tirsan Xildhibaannada Golaha Wakiillada Somaliland ee laga soo doortay gobolka Maroodi-jeex (Hargeysa), kana mid ah Xildhibaannada ka soo baxay Xisbiga maanta talada haya ee KULMIYE.
Guddoomiyaha Guddida Dhaqaaluhu waxa uu sheegay inaanay Xabbada uu ku cabsi gelinayo aanay waxba u arkayn, waxaanu yidhi; “Madaxweyne Siilaanyo waxaan leeyahay haddii aad adigu isleedahay xabbad baa laga baqayaa ama SPU iyo RRU oo waxa loogu talo-galay aynu ognahay oo aan loogu talo-gelin dalka gudihiisa ayaad nagu cabsi gelinaysaa. Nagu cabsi gelin maysid, meeshana sii fadhiyi maysid oo meesha waxaad ku fadhiyeysaa markaad Madaxweyne wanaagsan tahay oo ay dadkiisu raalli kaa yihiin.”
“Laakiin marka aad dadkaaga ku noqoto ee aad layso ee aad sidaad doontid-ba yeesho adiguna joogii maysid, adiguna ballan ayaannu ku qaadnay oo ILLAAHAY-na wuu innoo dhexeeyaa.”
Guddoomiyuhu wuxuu sidaa ku sheegay mar uu u warramay Telefeshanka Madaxbannaan ee Somaliland Space Channel.
Previous articleSomaliland passes central banking law, eyes foreign banks
Next articleMadaxweyne Obama oo sharfay Macalinka Sanadka 2012 ee dalka Maraykanka